I-Casa del Pueblo
Indlu itholakala esigodini esinokuthula saseLa Palma, imizuzu eyi-10 kuphela ukuya emabhishi amahle aseNayarit. Abantu abathanda ukujabulela indawo ethule, enethezekile neyimfihlo, futhi basabamba amazwibela e-pueblo yase-Mexican yoqobo neyiqiniso enemvelo eshisayo bamukelekile lapha!
Indlu enezitezi ezintathu inendawo enhle egqumeni elincane ebuka isigodi saseLa Palma maphakathi nentaba yolwandle. Ifakwe ngendlela ethokomele yamakholoni futhi inamagumbi okulala amabili, amagumbi okugeza amabili, ikhishi elihlome ngokuphelele, indawo yokuhlala evulekile kanye nekhona elincane lokusebenza elithule. Isimo somoya emakamelweni okulala sigcina indlu iyinhle futhi ipholile usuku lonke. Ukuvikela omiyane kuwo wonke amafasitela, imvelo kanye nempilo yasesigodini esikuzungezile kuqinisekisa ukulala okuhle ebusuku. Kusukela ethafeni eliphezu kophahla bonke ubuhle bendawo eshisayo bungaqashelwa: Kusukela emagqumeni aluhlaza atshalwe umango kuya emfudlaneni ocwebile wezintaba odabula idolobhana uze uyothi shazi olwandle lwasePacific.
Inendawo yokubhukuda engaphandle engase isetshenziswe kakade kanye nendawo yokupaka ekhethekile egcekeni elingaphambili.
Njengoba ubona ezithombeni, izingxenye ezincane zendlu, njengethala eliphezu kophahla, nezingadi ezizungezile zisalungiswa. Lokhu akuphazamisi ikhwalithi yokuphila endlini, kodwa ingaba nezithiyo ezithile zobuhle zokubukeka ngaphandle. Lokhu sekuvele kucatshangelwe ngentengo.
Idolobhana liseMizuzwini emi-2 nje yokuhamba ibanga lehla entabeni futhi linendawo encane nezitolo ezincane ezihlinzeka ngezinto eziyisisekelo zansuku zonke. Ukuze uthole okunikezwayo okuhlukahlukene, Amadolobhana iSan Blas (ukushayela imizuzu engama-20) kanye ne-Atikama (imizuzu eyi-10) anezimakethe zasendaweni zezithelo nemifino, izitolo zezikhumbuzo, amabhange, izitolo ezinkulu nezitolo zegrosa.
Esigodini ngokwaso, kunomfudlana osentabeni obizwa ngokuthi "i-El Arroyo" oletha amanzi abandayo nacwebile emagqumeni. Uma kudingekile, uhambo oluncane lokuqwala izintaba oluya ezindaweni ezigelezayo zamanzi lungahlelwa ukuze uthole ukuqabuleka okuseduze. I-Cocodrilario ingaphandle nje kwedolobhana futhi ikufanele ukuvakashelwa imindeni enezingane noma izifiki zemvelo.
Kunenqwaba yamabhishi anesihlabathi amahle aseduze kakhulu njengeLas Islitas, Playa de los Cocos kanye neMatanchén.
Ngeke ngibe ngqo eLa Palma, kodwa kukhona ilungu lomndeni njengomuntu ongathintwa esigodini nganoma yimuphi umbuzo, inkinga noma ukukhathazeka, okhuluma isiNgisi neSpanishi. Ngihlala ngitholakala nge-E-mail futhi ngixhumana njalo nomndeni nabangane endaweni ngakho noma iyiphi inkinga kufanele ixazululwe maduze.
Sijabule kakhulu ngabahlala isikhathi eside futhi sibakhetha kunezivakashi zesikhashana. Nokho, esimweni sokuhlala okuhlosiwe, okungaphezu kwenyanga, ngicela ungithinte ngokuqondile kokuthi j.groenendijk(at)gmx.de ukuze mhlawumbe nazane ekuqaleni.
Kubantu abahlala isikhathi eside, kune-señora engahlanza indlu kabili kuya kathathu ngeviki futhi ingawasha uma kudingeka. Kunomshini wokuwasha ngemuva kwendlu ongasetshenziswa, kodwa udinga ukuchazwa kanye ngumuntu othintana naye. Ukwengeza, uma ifunwa, i-señora inikezela ngokupheka kanye ngosuku ukudla okumnandi nokwesintu kwamanye ama-Pesos.
Ngeke ngibe ngqo eLa Palma, kodwa kukhona ilungu lomndeni njengomuntu ongathintwa esigodini nganoma yimuphi umbuzo, inkinga noma ukukhathazeka, okhuluma isiNgisi neSpanishi. Ngihla…